तथ्याङ्कः एक वर्षमा ५ हजार ३ सय ४६ जनाले गरे आत्महत्या ! « NBC KHABAR
तथ्याङ्कः एक वर्षमा ५ हजार ३ सय ४६ जनाले गरे आत्महत्या !
नेपालगन्ज, ३ फागुन । एक बर्षमा ५ हजार ३ सय ४६ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङक प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । २०७४÷०७५ आर्थिक बर्षमा नेपाल अधिराज्यभर ५ हजार ३ सय ४६ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङक प्रहरीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
५ नं. प्रदेश सरकार तथा स्थापना दिवसको उपालक्ष्यमा आयोजित आत्महत्या सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रममा प्रहरीले उक्त तथ्याङक सार्वजनिक गरेको हो । जसमध्ये २ हजार ८ सय ५४ जना पुरुष, २ हजार २ सय महिला, १ सय ११ जना बालक र १ सय ३९ जना बालिकाले आत्महत्या गरेको तथ्याङक नेपाल प्रहरीको तथ्याङकमा उल्लेख रहेको छ ।
सवैभन्दा बढी ३ हजार ८ सय ८३ जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङकमा उल्लेख छ । विश्वमा बर्षेनी ८ लाख मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङकमा उल्लेख रहेको प्रहरीले जनाएको छ । विश्वमा ४० सेकेण्डमा १ जनाले आत्महत्या गर्ने र एक हत्या हुँदा २५ जनाले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङकमा रहेको क्षेत्रिय प्रहरी अस्पताल नेपालगन्जका डिएसपी डा. आशिष दत्तले जानकारी गराए ।
मानसिक र व्यवहारिक समस्याहरुले ९० प्रतिशत मानिस आत्महत्या गर्ने गरेको खुलेको डिएसपी डा. दत्तले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मनोसामाजिक तथा अन्य आघातजन्य घटनाहरु पनि आत्महत्याका कारण रहेको आत्महत्या रोकथाम तथा न्युनिकरण सचेतना कार्यक्रममा जनाइएको छ । हत्यापछि भएको समस्याबारे निराकरण नगर्नु आत्महत्याको कारण बढ्दो रहेको प्रहरीको तथ्याङकले देखाएको छ ।
कमजोर आत्मबल भएका मानिसले मात्रा आत्महत्या गर्ने गरेको जनाइएको छ । यस्तै आत्महत्या व्यक्तिको कमजोरीका कारण हुने नभएर आनुवंशिक, मनोबैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य जोखिमका तत्वहरुको सयुक्त प्रभावका कारण हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङकले देखाएको छ । आत्महत्या रोकथामका लागि सजगता, मानिस स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सम्भावित लक्ष्यणहरुको पहिचान, उपलव्ध सेवा बारे जानकारी र पहुच, आत्महत्या बारे खुलेर कुरा गर्नु, आहार विहार र विचारलाई शुद्ध पारे आत्महत्या रोकथाममा न्युनिकरण हुने तथ्य प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।
आत्महत्या रोकथाम तथा न्युनिकरण सचेतना कार्यक्रमको आयोजना मध्यपश्चिम क्षेत्रिय अस्पताल नेपालगन्ज र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गरेको थियो ।